Iwu nzuzo nke Soie Virgin Hair Extensions Soie Virgin Hair Extensions Amụma nzuzo Ruo Mgbe Ebighị Ebi na Nwa Atụrụ
Iwu nzuzo nke Soie Virgin Hair Extensions - Forever Virgin Hair
Iwu nzuzo nke Soie Virgin Hair Extensions
Iwu nzuzo nke Soie Hair Extensions
Amụma Nzuzo a na-akọwa otu esi anakọta, jiri ya na nkekọrịta mgbe ị gara ma ọ bụ zụta nke sitere na soiehair.com (“saịtị ahụ”).
ANYỊ NA-ECHICHE NDỊ NA-EME
Mgbe ị gara na saịtị, anyị na-anakọta ụfọdụ ozi gbasara ngwaọrụ gị, gụnyere ozi gbasara ihe nchọgharị weebụ gị, adreesị IP, oge oge, yana ụfọdụ kuki ndị arụnyere na ngwaọrụ gị. Ọzọkwa, ka ị na-agagharị n'Ịntanet, anyị na-anakọta ozi gbasara ibe weebụ ma ọ bụ ngwaahịa ndị ị na-ele, ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ okwu ọchụchọ na-eziga gị na saịtị, yana ozi gbasara otu esi esi emekọrịta na saịtị. Anyị na-ezo aka na ozi a na-akpaghị aka dịka "Ozi Ngwaọrụ".
Anyị na-anakọta Ozi Ngwaọrụ na iji teknụzụ ndị a:
- "Kuki" bụ faịlụ data dị na ngwaọrụ gị ma ọ bụ kọmputa ma na-agụnye ihe nchọpụta pụrụ iche aha. Maka ozi ndị ọzọ banyere kuki, na otu esi gbanyụọ kuki, gaa na http://www.allaboutcookies.org.
- "faịlụ ndekọ" akara omume na saịtị, na nakọta data gụnyere adreesị IP gị, ụdị ihe nchọgharị, onye na-ahụ maka ịntanetị, na-ezo aka / wepụ ụzọ, na stampụ ụbọchị / oge.
- "mgbama Weebụ", "mkpado", na "pikselụ" bụ faịlụ eletrọnị eji edekọ ozi gbasara otu ị si eme nchọgharị na saịtị.
- [[NKATWU NDỊ NKWUZI NKE NDỊ MGBE A GA-ECHI ECHICHE NA-EME]]
Ọzọkwa mgbe ị na-azụ ma ọ bụ gbalịa ịzụta site n'Ịntanet, anyị na-anakọta ụfọdụ ozi sitere n'aka gị, gụnyere aha gị, adreesị ịgba ụgwọ, adreesị mbupu, ozi ịkwụ ụgwọ (gụnyere nọmba kaadị akwụmụgwọ [[Tinye ihe ọ bụla ọzọ ụgwọ ọrụ ụgwọ] ), adreesị ozi-e, na nọmba ekwentị. Anyị na-ezo aka na ozi a dị ka "Ozi Ozi".
[[Tinye ihe ọ bụla ọzọ ị na-ejikọta: GỤKWU AHỤRỤ AHỤ, NKWUKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE / ndekọ]]
Mgbe anyị na-ekwu maka "Ozi Nkeonwe" na Nzuzo Nzuzo a, anyị na-ekwu okwu banyere Ozi Ngwaọrụ na Ozi Ọhụụ.
Kedu ka anyị si eji ozi gị niile?
Anyị na-eji Ozi Order nke anyị na-anakọta n'ozuzu iji mezuo iwu ọ bụla a na-etinye site na saịtị (gụnyere nhazi ozi ịkwụ ụgwọ gị, ndokwa maka mbupu, na inye gị akwụkwọ edemede na / ma ọ bụ iwu nkwenye). Ọzọkwa, anyị na-eji Ozi Order a:
- Gwa gị okwu;
- Chekwaa iwu anyị maka ihe ize ndụ ma ọ bụ wayo; ma
- Mgbe iji kwekọọ na mmasị ị kesara anyị, nye gị ozi ma ọ bụ mgbasa ozi metụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị.
- [[BANYE NDỊ NA-EBE ỤLỌ A GA-EME]]
Anyị na-eji Ozi Ngwaọrụ anyị na-anakọta iji nyere anyị aka nyocha maka ihe ize ndụ na aghụghọ (karịsịa, adreesị IP gị), na ọtụtụ n'ozuzu iji melite ma bulie saịtị anyị (dịka ọmụmaatụ, site na ịmepụta nchịkọta gbasara otu ndị ahịa anyị na-achọgharị ma na-emekọrịta na saịtị, na iji chọpụta ihe ịga nke ọma nke mgbasa ozi ahịa na mgbasa ozi anyị).
[[BANYE NDỊ OTÚ NA-ECHI ECHICHE NDỊ ỌZỌ, gụnyere: ADVERTISING / RETARGETING]]
IKPEGHỊ Ozi gị
Anyị kekọrịta Ozi Nkeonwe gị na ndị ọzọ iji nyere anyị aka iji Ozi Nkeonwe gị, dịka akọwara n'elu. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eji Shopify iji mee ka ụlọ ahịa anyị dị n'ịntanetị - ị nwere ike ịgụtakwu banyere otú Shopify si eji Ozi Nkeonwe gị ebe a: https://www.shopify.com/legal/security. Anyị na-ejikwa Analytics Google iji nyere anyị aka ịghọta otú ndị ahịa anyị si eji saịtị - ị nwere ike ịgụtakwu banyere Google si eji Ozi Nkeonwe gị ebe a: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. I nwekwara ike ịpụ na nchịkọta Google ebe a: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
N'ikpeazụ, anyị nwekwara ike ịkekọrịta Ozi Nkeonwe gị iji kwenye na iwu na iwu ndị dị, iji zaghachi na ntinye akwụkwọ, akwụkwọ arịrịọ ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ gbasara iwu maka ozi anyị natara, ma ọ bụ iji chebe ikike anyị.
Dị ka akọwara n'elu, anyị na-eji Ozi Nkeonwe gị iji nye gị mgbasa ozi ezubere iche ma ọ bụ nkwukọrịta ahịa anyị kwenyere nwere ike ịmasị gị. Maka ozi ndi ozo gbasara otu oru mgbasa ozi ezubere, ị nwere ike ịga na akwukwo nkuzi Network Network Initiative ("NAI") na http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Ị nwere ike ịpụ na mgbasa ozi ezubere iche site na iji njikọ dị n'okpuru:
- [[GỊ NA-ECHICHE NDỊ NA-ECHICHE NA NDỊ AHỤRỤ NDỊ ỌZỌ A GA-EME]]
Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ịpụ na ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a site na ịga na Portal Advertising Alliance nke ụzọ ntanyepụ mgbasa ozi na: http://optout.aboutads.info/.
Biko mara na anyị anaghị agbanwe nchịkọta data anyị ma jiri ya mee ihe mgbe anyị hụrụ mgbaàmà Sistem na ihe nchọgharị gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye Europe bi na ya, ịnwere ikike ịnweta ozi nkeonwe anyị jidere gbasara gị na ịjụ ka e dezie ozi gbasara gị, emelite, ma ọ bụ ehichapụ ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ikikere a, biko kpọtụrụ anyị site na ozi kọntaktị n'okpuru.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bụ onye Europe bi na anyị na-edeba na anyị na-edozi ozi gị iji mezuo nkwekọrịta anyị nwere ike ịnọnyere gị (dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị na-eme njem site na saịtị), ma ọ bụ na ịchụso azụmahịa anyị ziri ezi nke edepụtara n'elu. Ọzọkwa, biko rịba ama na a ga-ebufe ozi gị na mpụga Europe, gụnyere Canada na United States.
Mgbe ị na-etinye usoro site na saịtị ahụ, anyị ga-edebe Ozi Njikwa gị maka ihe ndekọ anyị ma ọ bụrụ na ị ga - ajụ anyị ka ịhichapụ ozi a.
Anyị nwere ike imelite iwu nzuzo a site n'oge ruo n'oge iji chee, dịka ọmụmaatụ, mgbanwe na omume anyị ma ọ bụ maka ọrụ ndị ọzọ, iwu ma ọ bụ iwu.
[[BỤ Ọ BỤRỤ NWA ỌRỤRỤ NA-ECHICHE]
Ebumnuche abụghị saịtị maka ndị ọ bụla nọ n'okpuru afọ [[ENTER AGE]].
Maka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo anyị, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime mkpesa, biko kpọtụrụ anyị site na ozi email na shopsoiehair@gmail.com ma ọ bụ jiri ozi enyere nkọwa dị n'okpuru.
Mgbakwunye Soie ntutu
[Re: Nzuzo n'ikedo Officer]
2075 Powers Ferry Rd Marietta Georgia US 30367